Goatemalà: 30 Jona, andro mila tsarovana · Global Voices teny Malagasy
Goatemalà: 30 Jona, andro mila tsarovana
Voadika ny 07 Jolay 2018 5:14 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny jolay 2007)
Sary nopihan'i James Rodríguez ary nahazoana alalana ny fampiasana azy.
Isan-taona rehefa 30 jona, mankalaza andro fety ny Goatemalteka, rehefa manao matso ao afovoan-tanàna ny Tafika Goatemalteka. Niavaka ny tamin'ity taona ity satria ny bilaogera no tena mpitatitra ny lanonana, sy niatrika zava-tsy fahita firy.
Fa nahoana no misy fankalazana amin'ny 30 Jona? Ao amin'ny Guatemala Blog ianao afa-mahita ny valiny:
El presidente Julio César Méndez Montenegro, en el año de 1965, en conmemoración de la efemérides de Barrios, siendo su fundador, establece el 30 de junio como el Día del Ejército.
Tamin'ny taona 1965, ny Filoha Julio Cesar Méndez Montenegro mahatsiaro sady miara-mankalaza ny zavabitan'ny filoha teo aloha Justo Rufino Barrios, izay nanangana ny Tafika Goatemalteka, tamin'ny fametrahana ny 30 jona ho fetin'ny tafika.
Samy manana ny heviny araka ny isany ny bilaogera. Andro iray talohan'ny matso, nanambara ny bilaogera Prensa Negra Guatemala tamin'ny fitsikerana maventy ny hery mitam-piadiana tao amin'ny lahatsorany “En la víspera” hoe:
Yo no me quedare de brazos cruzados ire de parte del pueblo, con el pueblo y por el pueblo por medio de una marcha de protesta que habra ese dia a manifestar mi repudio a dicha institución
Tsy hipetra-potsiny aho. Handeha aho hisolotena ny vahoaka, miaraka amin'ny vahoaka ary hiaro ny vahoaka hamoaka ny tsy fankatoavako andrim-panjakana tahaka itony.
Ny ampitso, voilá, samy nandeha na ny matso na ny fihetsiketseham-panoherana nomanin'ny H.I.J.O.S, Fikambanan'ny zanakalahy sy zanakavavy mitady mari-panondroana sy rariny manohitra ny fahanginana, izay manana fifandraisana amin'ireo miaritra famoizana fianakaviana nandritra ny ady mitam-piadiana tao Goatemalà ny mpikambana ao aminy. Saingy maro ny zava-nitranga nandritra ny matso sy ny fihetsiketseham-panoherana. Indraindray sary iray no mahalaza zavatra maro noho ny teny an-jatony, araka ny asehon'i James Rodriguez, mpanao gazety sady bilaogera ao amin'ny blaoginy.
Ny lohatenin'ny sary dia “Nampiato matso miaramila ny diabe ho fahatsiarovana” Tany ianao afa-mahita ny zava-mitranga misokatra tsikelikely miaraka amin'ny fanazavana. Anisany ny sary amin'ity lahatsoratra ity, ary tsara fanahy izy nanome alalana tamin'ny fampiasana azy.
Na izany aza dia hafa noho izay mety ho hitanao ao amin'ny sary ny lanonana tany ambanivohitra Coban, araka ny hitanao ao amin'ny sarin'ny Blog Verapaces.
Con un tradicional desfile y la participación de bandas colegiales y seguramente algunas actividades especiales, el Ejercito celebró su día en la ciudad de Cobán.
Niaraka tamin'ny matso mahazatra sy ny fandraisana anjaran'ny tarika mpihiran'ireo sekoly, sy ireo hetsika manokana hafa, nankalaza ny fety ny tafika tao an-tanànan'i Coban.
Firenena kely i Goatemalà ary ahitana fifanoheran-javatra maro, fijery samy hafa, fa kely ny zavatra tantarain'ny fampahalalam-baovao. Asehon'ny bilaogera, amin'ny fomba malalaka, ankehitriny ny zavatra mila tantaraina.